Somaliland: Wasiir Faratoon oo ka Jawaabay Dacwad ka Dhan ah Wasaaradiisa oo loo Gudbinayo Maxkamadda Sare - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiir Faratoon oo ka Jawaabay Dacwad ka Dhan ah Wasaaradiisa oo...
Wasiirka wasaaradda Arrimaha Gudaha Jamhuuriyadda Somaliland Prof. Yaasiin Maxamuud Xiir (Faratoon), ayaa sheegay in aanay jirin wax tacadi ah oo ay u geysteen garabkii UCID ee uu hoggaaminayay Jamaal Cali Xuseen markii laga joojiyay shir ay ku qabsan lahaayeen Huteelka Maansoor ee Magaaladda Hargeysa toddobaadkii hore, shirkaas oo barbar socday shir kale oo Guddoomiye Faysal Cali Waraabe 7dii Bishan garabkiisa uga furmay Hargeysa.
Wasiirka Daakhiligu waxa kale oo uu intaas ku daray in qof kasta oo wax tirsada ama is leh waa lagu dulmiyay uu xaq u leeyahay in uu Hay’adaha garsoorka u dacwoodo oo dalku yahay mid dimuquraadi ah oo aan la is cabudhinayn.Waxaanu sidaa ku sheegay waraysi kooban oo uu xalay siiyay wargeyska DAWAN.
Wasiirka oo ka jawaabayay su’aal laga waydiiyay sida uu u arko eedo uu u soo jeediyay Jamaal Cali Xuseen, waxa uu yidhi “Annagu (Wasaaradda arrimaha gudaha) markii aanu shirkiisa joojinaynay sharciga ayuun baanu u raacnay ee ma jiro wax dambi ah oo aanu Jamaal gaar uga galnay iyo xuquuq uu leeyahay oo aanu meel ka dhac u geysanay. wadanka laba UCID kama jiraan ee dalka UCID kaliya oo sharci ah ayaa ka jirta shirkii kale ee ay qabsadeenna waa tii guddiga diiwaan gelinta ururradu ka hadashay ee sheegtay in uu sharci yahay markaa sharciga ayuun baanu raacnay ee wax isaga (Jamaal) u gaar ah oo aanu ku duudsiyaynay ma jirto.”
Wasiirka oo ka jawaabayay dacwad uu Jamaal sheegay inuu u gudbinayo maxkamadda sare taasi oo ka dhan ah hay’adaha dawladda ee shirkiisii joojiyay, waxa uu kaga jawaabay “Horta dalku waa dimuquraadi oo ma jirto wax cabudhin ahi iyo car juuq dheh. qof kasta oo wax tirsadaanna xaq ayuu u leeyahay in uu ka dacwoodo Jamaal-na haddii uu u arkay in xuquuq uu leeyahay laga duudsiyay xaq buu u leeyahay in uu dacwoodo laakiin dhankayaga horena ugumaanu xad gudbin imikana diyaar uma nihin in xuquuq uu leeyahay aanu ka duudsino.”